ကားဘီးတွေရဲ့ Alignment (အလိုင်းမင့်) မညီတော့ဘူးဆိုရင် ကားတာယာတွေတစ်ခြမ်းစီ မညီမညာစားသွားတာ၊ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် တစ်ဖက်ကိုဆွဲသွားတာ အစရှိတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတော့ တော်တော်များများလည်းကြုံဖူး/ကြားဖူးကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ဖြုတ်တပ်ပြုပြင်လဲလှယ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာ ကားအလိုင်းမင့်ချိန်ကြရတာလည်း ကားမောင်းသူတိုင်းလိုလိုသိကြပြီး အမြဲသတိထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့ Wheel Balance ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ကားမောင်းသူတော်တော်များများသတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ ဒီ Wheel Balance ဆိုတာလေးကလည်း ကားမောင်းနေသူတွေနဲ့ ကားရဲ့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။
Wheel Balance ဆိုတာ ဘာလဲ?
Wheel Balance ဆိုတာကတော့ ကားတစ်စီးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန် ကားဘီးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားခွေ (သံ၊ စတီး၊ အလွိုင်း) နဲ့ကားတာယာတို့နှစ်ခု တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဟန်ချက်ညီညီ အချိုးကျကျလည်ပတ်နိုင်ဖို့ အဓိက လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောရင် ကားဘီးခွေနဲ့ ကားတာယာ fitting ကျအောင်တပ်ထားတာပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ အချိုးကျကျမလည်ရမှာလဲလို့ ထင်မြင်စရာရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ ကားကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကားဘီးနဲ့တာယာဟာ အချိုးကျကျ ကာရံညီညီ မလည်ပတ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအရာကို ကျနော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်၊ မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။
ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တော့... အရာဝတ္ထုတွေလည်ပတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဗဟိုခွာအား (Centrifugal Force) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ။ ဗဟိုခွာအားဆိုတာကတော့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုက လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ လည်ပတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ အလယ်ဗဟိုချက်ကနေ အပြင်ဖက်ဆီကို အားတွေပြန့်ကားထွက်လာတဲ့သဘောလို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်ယူလို့ရပါတယ်။
အဲဒီလို ဗဟိုချက်တစ်ခုကနေလည်ပတ်နေတဲ့ဘယ်အရာမဆို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်ပတ်ဖို့အတွက် လည်ပတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အလေးချိန်အနိမ့်အမြင့်တွေ အချိုးညီနေမှရပါမယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူး၊ ဗဟိုချက်တစ်ခုကနေလည်ပတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေက အချိုးအစားတွေမညီဘူး အနိမ့်အမြင့်တွေမညီဘူး၊ အလေးချိန်တွေမတူညီဘူးဆိုရင်တော့ ဗဟိုခွာအားဆိုတဲ့ ရူပဗေဒသဘောတရားအရ အဲဒီအရာဝတ္ထုတွေကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မလည်ပတ်နိုင်တော့ဘဲ တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတော့မှာပါ။ ဒီလိုသဘောတရားကနေ Wheel Balance ဆိုတဲ့ သဘောတရားပေါ်ပေါက်လာရတာပါ။
Wheel Balance ဘာကြောင့် မဖြစ်ရတာလဲ?
ကျနော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ကားဘီးခွေနဲ့ ကားတာယာတွေကို Wheel Balance ချိန်ပေးရတာမျိုးကလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကားတာယာနဲ့ခွေတွေဟာ ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတွေသုံးပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည်ဆိုပါစေ Molding ဆိုတဲ့ မိုသွန်းလောင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေ၊ သံသား၊ သတ္တုအသားအစရှိတာတွေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကားရဲ့ဝန်၊ ဝိတ်ကို ထမ်းသွားရင်းနဲ့ဖြစ်စေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်နေရာရာမှာအလေးချိန်လျော့နည်းနေတာ၊ ပါးနေတာ၊ လိမ်နေတာ၊ ချိုင့်နေတာ မျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအားနည်းချက်တွေနဲ့ ကားရဲ့အရှိန်မြန်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Wheel Unbalance တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ရူပဗေဒသဘောတရားအရ တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရတော့တာပါပဲ။ ဒီလိုတုန်ခါမှုတွေက သာမန်တုန်ခါရုံနဲ့ပြီးမသွားဘဲ ကားအောက်ပိုင်းနဲ့ ကားရဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတွေကိုပါ အနှောင့်အယှက်ပေးတော့တာပါပဲ။
ဒါမျိုးဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်လာတတ်သလဲဆိုရင်တော့ ကီလို ၆၀ (ဝါ) ၇၀ နှုန်းနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန် (တချို့ကားတွေမှာတော့ ကီလို ၁၀၀ နဲ့အထက်) မောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်တတ်တာပါ။ ကားလမ်းတွေကလည်း ညီညီညာညာနဲ့ကောင်းနေရဲ့သား၊ ကားရဲ့အောက်ပိုင်းကနေ စတီယာရင် ခွေအထိ ဆိုးဆိုးရွားရွားခါရမ်းတုန်ခါချင်တာမျိုး၊ ကားကို ဘယ်ဘက်/ညာဘက် တစ်ဖက်ဖက်ဆီကို ဆွဲချသလိုမျိုး ခံစားလာရတယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါကားရဲ့ Wheel Balance မညီညာတော့ဘူးဆိုရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတရားပါ။ ကားအရှိန်တိုးလာလေလေ ပြင်းထန်တဲ့တုန်ခါမှု ဖြစ်လာလေလေပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကားအရှိန်လျော့နေတဲ့အချိန်မှာ သိသိသာသာတုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ကားအရှိန်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ တုန်ခါမှုမရှိတော့ဘဲတည်ငြိမ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားအရှိန်လျော့နေတဲ့အချိန် သိသိသာသာတုန်ခါနေတဲ့ကားကို အရှိန်မြှင့်မောင်းတဲ့သူရှားပါးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်၊ ဘရိတ်မှေးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ ကားစတီယာရင်ကိုလာတိုးပြီး တုန်ခါမှုဖြစ်စေတာမျိုးကလည်း ကားရဲ့ Wheel Balance မညီညာတော့တဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Wheel Balance ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ မောင်းနှင်ရာမှာ ကားကိုတုန်ခါမှုဖြစ်စေတဲ့ အခြားအချက်အချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့...
တကယ်တော့ Cupped Wear ကိုပြောတာပါ။ မြန်မာလိုအနီးစပ်ဆုံးပြောရရင်တော့ ထိပ်ကွက်သွားတာ၊ တာယာအကွက်လိုက်အကွက်လိုက်ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ ပုံမှန်အလိုင်းမင့် မှန် (Balance မှန်) နေတဲ့ကားတာယာရဲ့ပန်းတွေဟာ ပုံမှန်ညီညီညာညာပွန်းစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ အလိုင်းမင့် မမှန်တာကြောင့် တာယာတစ်ခြမ်းစားသွားတာ၊ ကားအောက်ပိုင်းပစ္စည်းတွေ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ပွန်းစားတာတွေနဲ့ ဒီ Wheel Balance မညီမျှမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ တာယာပွန်းစားမှုတွေက ကြည့်ရင်သိသိသာသာ ကွဲပြားပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် လေပေါင်ချိန်ညီညီနဲ့ထိုးထားတဲ့တာယာတစ်လုံးဟာ ကားရဲ့အလေးချိန်ဝိတ်ကို တူညီစွာထမ်းပိုးထားရတာမို့ ကားတာယာနဲ့မြေပြင်ထိတွေ့ပွတ်တိုက်မှုတိုင်း တူတူညီညီမျှမျှတတ ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး ညီညီညာညာ ပန်းတွေပွန်းစားကုန်ဆုံးရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီလို Wheel Balance မညီမျှတဲ့ တာယာတွေမှာတော့ ကားဟာအရှိန်နဲ့ လည်ပတ်လေလေ ကားတာယာနဲ့ မြေပြင်ပွတ်တိုက်မှုတွေက မညီမညာဖြစ်လေဖြစ်ပြီး ထိတဲ့အပိုင်းတွေက ထိ၊ မထိတဲ့ အပိုင်းတွေက မထိဘဲ၊ ထိတွေ့မှုများများခံရတဲ့အပိုင်းတွေက ကားတာယာတွေကို ဟိုတစ်ကွက်၊ ဒီတစ်ကွက် ထိပ်ကွက်တွေဖြစ်ပေါ်စေတော့တာပါပဲ။ မြင်သာထင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ ကားဘီးဟာ မြန်လွန်းလို့သာ လည်တယ်ထင်နေရတာ တကယ်ဆို မလည်ဘဲ ခုန်ခုန်သွားနေသလိုမျိုးဖြစ်တာပါ။
ကားတာယာတွေရဲ့တည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုင်းတွေအရ ပွန်းစားကွက်သွားတဲ့နေရာတွေဟာ ကားရဲ့ဖိအားတွေ၊ Stress တွေကို ခံနိုင်ရည်နည်းသွားပြီး အချိန်မရွေး တာယာပေါက်တာ၊ တာယာကွဲတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အမြန်လမ်းမှာ ကားအရှိန်နဲ့သွားနေချိန် ကားတာယာပေါက်တာ၊ ကွဲတာ ဘယ်လိုအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းပြဖို့ လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး။
စတီယာရင် (Steering) တုန်ခါတာ
ကားရဲ့ဘီးတွေ ဘယ်/ညာ ကွေ့နိုင်/ခေါက်နိုင်ဖို့အတွက် စတီယာရင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး လိုသလို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာမို့ ကားရဲ့ဘီးတွေနဲ့ စတီယာရင်ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်က အတော်လေးကိုကြီးမားပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Wheel Balance မညီညာမှုတွေကြောင့် ကားဘီးတွေတုန်ခါမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း အဲဒီတုန်ခါမှုတွေက စတီယာရင်ဆီကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလိုနေရာမှာ ကားစတီယာရင်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေကြောင့် ကားစတီယာရင်တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကားစတီယာရင် ဂမ်းဘွတ်ချောင်တာမျိုးတွေကြောင့် လမ်းကြမ်းကြမ်းမောင်းတဲ့အခါ "ဂုတ်ဂုတ်" မည်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် စတီယာရင် ဆီမရှိလို့ စတီယာရင် ပန့် (Pump) ငြီးတာ၊ ဘယ်/ညာခေါက်တဲ့အချိန် စတီယာရင် လေးပြီးခါတာ၊ ဆွဲတာတွေကလည်း ကားစတီယာရင်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေမကောင်းရင်ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီကား Wheel Balance တွေမညီညာမှုကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးကတော့ အပေါ်ကအချက်တွေနဲ့ ကွဲပြားပြီး ကားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့မောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ၊ နောက်ပြီး ကားလမ်းညီညီညာညာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ၊ နောက် ပုံမှန်အရှိန်နည်းနည်းနဲ့မောင်းနေချိန်တွေမှာမဖြစ်ဘဲ အရှိန်မြှင့်မောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာထဖြစ်တာမှ Wheel Balance ပြဿနာလို့ဆိုနိုင်တာပါ။ Wheel Balance မညီဘူးဆိုရင်တော့...
ရှော့ဘား (Shock absorber) ၊ Hub Ball နဲ့အောက်ပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးတာ
ကားတာယာရယ်၊ ခွေရယ်နဲ့ အဓိက ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေက ဟက်ဘောအထိုင်တွေရယ် သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာ ကားရဲ့ဝိတ်ကို ထမ်းထားတဲ့ ကားရဲ့ Compression နဲ့ Tension ကို အဓိက ထိန်းညှိပေးတဲ့ ရှော့ဘားတွေရယ်လည်း ဒီ Wheel Balance မညီမညာဖြစ်တာကို မပြုပြင်ဘဲ ကာလတာရှည်ထားမယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူပျက်စီးပါလိမ့်မယ်။ မလိုအပ်တဲ့ ကားဘီးတုန်ခါမှုတွေ၊ ခုန်သလိုဖြစ်နေတာတွေကြောင့် Impact Load တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကားအောက်ပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တာပါ။
အထူးသဖြင့် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့လည်း မြို့တွင်းပုံမှန်အရှိန်နဲ့သွားနေတာမျိုးမှာ တာယာ Wheel Balance မညီမျှမှုတွေကြောင့်လည်း ကားဆီပိုစားလာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကားလေပေါင် မညီမျှတာ၊ ကားအလိုင်းမင့် မညီမျှတာတွေကြောင့် ဆီပိုစားသလိုပါပဲ။
ကားဘီး Wheel Balance မညီညာတဲ့အခါ ကားကိုလိုသလိုအရှိန်တင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ကားရဲ့ ဘီးတွေက ညီညီညာညာလည်ပတ်ခြင်းမရှိတာကြောင့် လိုအပ်တဲ့အရှိန်ရရှိဖို့ ကားအင်ဂျင်ရုန်းအား ပိုမိုလိုအပ်လာပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်မလိုအပ်ဘဲ ပိုရုန်းရတဲ့အခါ ဆီပိုစားလာတာဟာ သဘာဝပါပဲ။
Wheel Balance ဘယ်လိုချိန်မလဲ?
ကား Wheel Balance ချိန်တာတွေကတော့ Static Balance နဲ့ Dynamic Balance ဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပြားပြီး
Static Balance ဆိုတာကတော့ ကားခွေ (Rim) နဲ့ ကားတာယာ အပေါ်/အောက် မညီညာမှုတွေကို ချိန်ညှိတာဖြစ်ပြီး
Dynamic Balance ဆိုတာကတော့ တာယာနဲ့ခွေ ဘေးတိုက်အနေအထား လိမ်ဖည်စောင်းနေတာမျိုးတွေကို ချိန်ညှိတာလို့ ယေဘုယျနားလည်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကား Wheel Balance Counter Weight တုံးတွေကို အသုံးပြုပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ဝိတ်တုံးတွေကို အစားထိုးအလေးချိန်အဖြစ် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကားရဲ့ဗဟိုခွာအား (Centrifugal Force) ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးရတာပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ ကား Wheel Balance ဝိတ်တုံးတွေကို Gram ၊ Lb (pound) အစရှိသဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး Weight တုံးတွေရဲ့ အမျိုးအစားနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံ၊ အရည်အသွေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအနိမ့်အမြင့်ကွာခြားပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက ကားဘီး Wheel Balance မညီတဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပါ။ ဒီလိုအခြေအနေတွေက ကားဘီး Wheel Balance မညီတဲ့အခါမှသာမက တာယာလိမ်နေတာမျိုးစတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း ဒီလိုအလားတူ ရောဂါလက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို ရောဂါလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့လာရတယ်ဆိုရင် အလွယ်ဆုံး ကားတာယာကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်တာမျိုးနဲ့ ခေတ်မီကား Wheel Balance ချိန်စက်တွေနဲ့ ဘီးတစ်ဘီးချင်းဆီကို တိုင်းတာစစ်ဆေးပြုပြင်သင့်တာပါ။
ကား Wheel Balance မညီညာတာဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြဿနာလေးလို့ထင်ရပေမဲ့ ကားကို အမြန်လမ်းလိုနေရာမျိုးမှာ အရှိန်နဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန် ကားဘီးတွေရဲ့ Wheel Balance မညီမျှမှုကြောင့် ကားမောင်းသူရော၊ ကားရော အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ကြုံတွေ့လာရတယ်ဆိုရင် ကားအောက်ပိုင်း ပစ္စည်းတွေကို စစ်ဆေးပြုပြင်တာ၊ ကား အလိုင်းမင့်ချိန်တာ၊ ကားလေပေါင်ချိန်တာတွေအပြင် Wheel Balance တွေကိုလည်း သေချာဂရုတစိုက် မမေ့မလျော့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းကြပါစေ။